Taariikhda My Butros » Sidee inaad ku raaxaysatid Date First
Last updated: Jan. 22 2020 | 2 min akhri
Jeer aad u badan oo lamaane cusub overthink ay taariikhda ugu horeeyay. Waxa ay u ciyaaraan xaaladood oo kala duwan oo madaxooda ku saabsan waxa laga yaabo dhici karto oo is shaqeeyaan galay rabin in ka hor inta ay si dhab ah u wada heleen. fikradda ugu weyn ee helitaanka in la ogaado qofka kale qaadataa kursi dib ugu walwal ku saabsan in ay samaynta fikrad wanaagsan – ay wejigooda ku saabsan oo aad u badan, aad u badan hadlaya, Ma ka hadlayo oo ku filan, iyo iyo.
Taariikhda ugu horeyso waa in waqti aad ku ogaan qofka kale iyo dhagaysiga iyo wax ka qabashada waxay dhahayaan. Sida aad ku dhagaysan kartaa qofka kale marka aad doonayso in ka badan waxa aad oranayso iyo waxa aad tahay ama ma samaynayno, halka uu isagu ama iyadu waxa uu ka hadlayaa? Haddii aad u maleynaysid in ay ku saabsan, ay tahay inaad waqti aad diiradda naftaada iyo halmaamay in diiradda ugu weyn waa in qofka kale. Waxaad la kulmi maalintii oo dhan naftaada; Naftaada siiyo nasasho iyo waqti la qaataan qof kale.
Sidaas, waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo madaxaaga oo diirada xaadirka ah. Waa maxay waxa uu isaga oo sheegay in aad la xidhiidhi karaa? Waa maxay iyadu qabanayaan in aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaadaan? Fikrad kale oo wanaagsan waa in la xusuusto in ay tani sidoo kale waa uu taariikhda ugu horeeyay, oo isagu waa badan tahay oo keliya sida habdhiska sidii aad. Ma uu iloobin in la furo albaabka aad u? Ama aan ka soo jiid aad kursi? Ma waxay u muuqdaan in la hadlaya nafteeda ku saabsan oo aan ku weydiiyo su'aalo ku? Marka aad wax ka milicsano arki Xaaladahan in qofka kale waa nervous aad, waa u fududahay inay iska tagaan oo ay arkaan meesha inta kale ee habeenka u horseedi kara.
Haddii aad tahay oo ku saabsan neefta xun nervous, sii-abuurleeyda qaar in boorsada ama jeebka. Waa ay fiicnaan laheyd in ay leeyihiin qaar ka mid ah Kleenex ama ku guntay oo meel kula sidoo. Uma baahnid in aad soo golaha wasiirada ee daawada oo dhan, laakiin arimo dhowr ah oo adiga ama kuu dhow la caawin doono in ka badan kuu sahlo.
Barta ugu weyn ee ay u dhan of this waa in uu waqti la qaato taariikhda xiisaynta iyo isaga ama iyada shirkadda. Life dhacaya iyo mararka qaarkood waxyaabo aan arintu sidaad qorsheysay. Haddii aad maskaxdaada furan (iyo wadnaha) waxaad yeeshaan wax kasta oo dhacaa rogo karo. Tani waxay noqon kartaa maalinta ugu horreysa ee badan. Is dejiya oo waxay ku raaxaystaan!